Fanendahana srilankey: nitolo-tena ilay kaomandà nandroba volamena 5 kilao | NewsMada
Ny ratsy tsy misy tandroka ! Ny hitsikitsika natao handihizana indray no mipoaka ny zanak’akoho. Komandà ao amin’ny polisim-pirenena no nandroba volamena mavesatra dia mavesatra, ana srilanke. Tsy lany andro nikaroka ny mpitandro filaminana namany, satria nitolo-tena ny lehilahy.
Nitolo-batana tamin’ny polisy sady nitondra ilay volamena milanja 5,360kg ilay komandà eo anivon’ny polisim-pirenena, niaiky fa nandroba io volamena io, ny talata lasa teo. Hatolotra ny fitsarana izy ary hotanterahin’ny polisy ny fombafomba tokony hatao hamerenana ny entana amin’ny tompony, nahalala avy hatrany fa azy io volamena io ary tsy nisy nanimbinana.
Raha tsiahivina ny tantara, ny 10 septambra 2018 teo, naharay fampandrenesana fanendahana mitam-piadiana, nahavoazana teratany Srilanke iray ny mpitandro filaminana. Voalaza tamin’izany fa very, tamin’io fandrobana io, ny volamena milanja 5,360kg. Ny andron’io ihany, naharay filazana ny mpitandro filaminana fa misy fiara mampiahiahy teny Antsahavola teny.
Nanomboka teo, nanao ny fitsirihina ny polisy mpanao famotorana ka nahafantatra fa nisy ifandraisana tanteraka ireo tranga roa ireo. Ny loharanom-baovao ihany koa no nampahafantatra fa nisy olona nitonona ho « commandant » nitondra anio fiara nilaozana teny Antsahavola io.
Nisy ihany koa ireo polisy mpandrindra ny fifamoivoizana nanamarina fa nitonona ho «commandant » tokoa ilay olona nitondra io fiara io. Nitohy hatrany ny fanadihadiana izay tonga tamin’ny fahitana ny tompon’ny fiara. Nilaza ito farany fa nisy nindrana io fiara io ary ilay manamboninahitra ao amin’ny polisim-pirenena.
Fantatra ihany koa fa tompon’antoka voalohany tamin’izao fanendahana mitam-piadiana izao ihany koa ilay mpamilin’ny fiaran’ilay Srilanke. Niaky tanteraka ny heloka nataony ity farany ity ary nanondro ny namany sy ny mpiray tsikombakomba aminy. Ilay manamboninahitra kosa, tsy niverina niasa intsony ka namoahana « Avis de recherche », dia indro nitolo-batana, niaraka tamin’ny entana nangalariny.